မဆုမွန်: ပေါ့ပ်ဂီတဘုရင် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် အမှတ်တရ
ပေါ့ပ်ဂီတဘုရင် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် အမှတ်တရ
မနေ့က ရဟူးလ်သတင်း ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ရိူက်ကြီးတင်ငိုရင်း မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ သမီးလေး ပဲရစ်ကက်သရင်း ဂျက်ဆင်ရဲ့ ဆို့ဆို့နင့်နင့် တစ်လုံးချင်းစီ ပြောသွားတဲ့"I just want to say ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine... I just wanted to say I love him so much" စကားလုံးလေးတွေကို နားထောင်ရင် သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖခင်တစ်ယောက် သေဆုံးသွားရတဲ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့ ဆုံးရူံးမူရဲ့ အပူသောကကို ထပ်တူခံစားမိပါတယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောကကြီးက လူသား တစ်ယောက် ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ သွားသူထက် ကျန်ရစ်သူတွေမှာ ပူပင်သောက ဗျာပါဒကြီးစွာ ခံစားကြ ရပါတယ်။
ရင်ဘတ်သူရဲကောင်း သို့မဟုတ် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်... ဖမ်းဆုပ်ရခက်ခဲတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ဖြစ်လာအောင် ပေါ့ပ်သံစဉ်တွေနဲ့ ရဲတင်းစွာ စတင်လှုပ်နှိုး၊ ဒီ့နောက် သွက်လက်မြူးကြွ ဟန်ပန်အမူအယာ၊ ကကြိုးကကွက် ဆန်းပြားထွေလာနဲ့ ဟန်ချက်ညီညီ ချိတ်ဆက်ပေါင်းဖက် ပေးခဲ့သူ၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပရိသတ်ကို ဟင်းလင်းပြင်ဆီ ဆင့်ကာဆက်ကာ ခေါ်ဆောင်သွားရင်း နယ်ပယ်သစ်တရပ်ကို မွေးဖွားပေးလိုက်ရာကနေ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ သူမတူတဲ့ လင်းလက်တောက်ပြောင် ကြယ်စင်တစင်းအဖြစ် ကမ္ဘာကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တာပါ။ သွားရိုးသွားစဉ် မဟုတ်တဲ့ ဖောက်ထွက်တီထွင်မှု၊ ပရိသတ်နဲ့ တသားတည်း ကျနမှုကြောင့် သူဟာ ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်အကောက်ခံရတာပါ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ဘတ် (နှလုံးသား) ကို စကားလုံးတွေ၊ သံစဉ်တွေ၊ ကချက် ကကွက်တွေနဲ့ စက္ကန့်မခြား ညှို့ယူဖမ်းစားခဲ့သူ ပါရမီရှင်တဦးပါ။
ပြောင်ပြောင်လက်လက် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဆင်ယင်တတ်သူပါ။ ၅ ပေ ၁၀ လက်မ လောက် အရပ်ရှည်ပြီး၊ ပိန်လှီလှီခန္ဓာကိုယ်ကို ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ချိုးပြောင်း ကွေ့ကောက် ဆန့်တန်း ညွှတ်ကိုင်း ရှေ့နောက် ခုန်ပေါက် ကစားပြသွားတာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုဆို၊ ကက ပရိသတ်အတွက် မမောနိုင်တဲ့ မျက်နှာပေး၊ ပြောပေါက်ဆိုပေါက်တွေကလည်း ပရိသတ်နဲ့ အတိုင်အဖောက် ညီမှညီ၊ တချို့အမျိုးသမီးတွေဆို သူ့ ဟန်ပန် အမူအယာကို ကြည့်နေရင်း၊ အော်ဟစ်အားပေးရင်း သတိလစ်တာတောင် ရှိတယ်။ သူက ပရိသတ် ထဲမှာ၊ ပရိသတ်ကလည်း သူ့ထဲမှာ။ တယောက်ရဲ့ ရင်ဘတ် တယောက် အပြန်အလှန် ၀င်ရောက်နေတဲ့ သဘော။
အညာနွေတမာမြေဘလော့ခ် မှ တဆင့် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ပို့စ်လေးကို ကြိုက်နှစ်သက်လွန်းသဖြင့် ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြခွင့်ပြုတဲ့ ဘလော့ခ်ပိုင်ရှင်သူငယ်ချင်းဇနီးမောင်နှံကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Posted by မဆုမွန် at Wednesday, July 08, 2009
အရင်က မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် အကြောင်းကို ဒီလောက် မသိဘူး...ခု အစ်မ ရဲ့ ပိုစ့်လေး ကိုဖတ်လိုက်မှ ပဲ သိပြီး နှမြောရကောင်းမှန်းသိတော့တယ်..။ ဒါပေမယ့် သိတဲ့ အချိန်မှာ...သူမရှိတော့ဘူး....း(
အဲ့သီချင်းစပ်တာ Lionel Richie လဲပါတယ် ဆိုတာ အခုမှသိတာ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ရေးတယ်လို့ပဲ သိထားလို့လေ...